Igumbi elipholileyo elinebalcony kwiB&B eForte dei Marmi
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguEmanuela
Igumbi lokulala eliBhulowu eliKhanyayo ligumbi elipholileyo neliluhlaza okwesibhakabhaka elinebalcony, ebekwe kumgangatho wokuqala weB&B Due passi dal mare. I-B&B inamagumbi amathathu, igumbi lokuhlala elizele ziincwadi, ikhitshi elifana nezinye iindwendwe, indawo yokupaka iimoto yabucala kunye negadi etyaliweyo. Le ndlu ibekwe kwindawo enoxolo kwaye ikwindawo ephambili. Iivenkile kunye nazo zonke iintlobo zeenkonzo ziku-100m kude, kumbindi wesikwere saseCinquale. Iilwandle zasekhaya ziku-200m kude kwaye ukuya eForte dei Marmi kuthatha nje imizuzu eli-10 ngebhayisekile.
I-Light Blue Bedroom ephindwe kabini yi-14 m2 kwaye inikwe yonke into oyifunayo: i-flat screen TV, i-air conditioning, i-minibar, umatshini we-espresso, i-anti-alergic mattresses ekhululekile kwi-latex, amalaphu aphezulu, i-wardrobe ebanzi kunye netafile esecaleni kwebhedi enesibane. Igumbi lokuhlambela labucala libekwe ngaphandle kwepaseji kwindawo yasebusuku, kufutshane negumbi. Inebhafu, i-bidet kwaye ixhotyiswe ngesixhobo sokomisa iinwele, i-mat, iitawuli ezithambileyo ezimfumamfuma, iingubo zokuhlambela kunye neemveliso zamayeza kunye nesepha.
Isidlo sakusasa esityebileyo esisekelwe kwiimveliso zasekuhlaleni; uqhagamshelo lwe-intanethi ye-Wi-Fi; Ukusetyenziswa kweebhayisekile; Indawo yokupaka iimoto yangaphakathi; Ukusetyenziswa kwekhitshi ngokufanayo nezinye iindwendwe; Ukucocwa kwemihla ngemihla kwegumbi; Ulwazi lokhenketho kunye nolwazi jikelele malunga nommandla.
ISIZATHU SUKA EMANUELA
Isidlo sakusasa se-Italian esimnandi sinikezelwa rhoqo kusasa kwindawo yokutyela. Kuthi, bantu base-Italiya, isidlo sakusasa senziwe ngekofu kunye neepastries… kwaye kunjalo nangesidlo sakusasa ekhaya! Igcwele iimveliso zasekhaya, iimarmalades eziphilayo kunye neejam ezisuka ngqo kwiifama zaseTuscan, iziqhamo ezitsha kwigadi yethu, i-croissants, iibhiskithi, i-cereal, iyogathi, iindidi zamaqebengwana kwaye okokugqibela kodwa okungakuncinananga, ukuba iindwendwe zikhetha isidlo sakusasa esimnandi, isonka esinonyangwa. inyama kunye namasi. Ikona enikezelwe kwi "Wellness Breakfast" nayo igcinwe kakuhle, apho unokufumana khona iinkozo ezipheleleyo, i-yogurt yendalo, isonka sengqolowa, iti kunye neeti ze-herbal, imbewu kunye neziqhamo ezomisiweyo ezisemgangathweni. Ngexesha lasehlotyeni, iindwendwe zinokugqiba ekubeni zidle isidlo sakusasa kwi-terrace emoyeni ovulekileyo. Ukuba unesifo se-celiac, sixelele nje kwaye siza kulungiselela ukutya okungenagluten.
Ibhedi kunye neBreakfast DUE PASSI DAL MARE ikwindawo yokuphumla kodwa enesicwangciso. Ngemizuzu embalwa abantu banokufika kumbindi wesikwere we-Cinquale, apho unokufumana iivenkile, iibhari, iindawo zokutyela, i-pizzeria, i-ice cream, iposi kunye nekhemistri.
Kwisikwere kukho iSalsamenteria delicatessen, ethengisa zonke iimveliso zegastronomic zasekhaya kwaye inikezela ngekhefu lokungcamla kunye nesidlo sangokuhlwa esisekwe kwiimveliso zalapha ekhaya.
Amalwandle asekuhlaleni amatye avela kuthi kwaye ngokukodwa indlu i-200m kude nendawo yokuhlambela "i-Eden", eyanika isivumelwano kwiindwendwe zethu. Ngexabiso elikhethekileyo banika izixhobo zaselwandle (i-ambrela yelanga, i-sunbed, izitulo) kwaye ngokucacileyo inkonzo yabahlanguli.
Igumbi lokulala eliBhulowu eliKhanyayo ligumbi elipholileyo neliluhlaza okwesibhakabhaka elinebalcony, ebekwe kumgangatho wokuqala weB&B Due passi dal mare. I-B&B inamagumbi amathathu, igumbi lokuhlala elizele ziincwadi, ikhitshi elifana nezinye iindwendwe, indawo yokupaka iimoto yabucala kunye negadi etyaliweyo. Le ndlu ibekwe kwindawo enoxolo kwaye ikwindawo ephambili. Iivenkile kunye nazo zonke iintlobo zeenkonzo…
Via Cateratte, 112, 54038 Capanne-Prato-Cinquale MS, Italy
Iivenkile kunye nezinye iinkonzo ziku-100m kude, kumbindi wesikwere saseCinquale. Iilwandle zasekhaya ziku-200m kude kwaye ukuya eForte dei Marmi kuthatha imizuzu eyi-15 ngebhayisekile.
Ezingqonge thina kukho iindawo ezininzi zokubona. Singakunika ulwazi lokuya eLe Cinque Terre, ipaki yelizwe elihle elinombono ophefumulayo wolwandle, ukutyelela isixeko esidumileyo sobugcisa njengePisa okanye iLucca okanye iFlorence, ukutyelela umqolomba wemarble waseCarrara, ukuya. kwiCorchia Underground. ETuscany kukho izinto ezininzi ezifanelekileyo ukuba zibonwe.
Ukuhamba ngebhasi apha akukho nto ikhululekile, kodwa uloliwe ulungile ukuba ufuna ukwenza uhambo lwemihla ngemihla. Singakusa kwisikhululo sikaloliwe ngaphandle kweengxaki (ngokucacileyo simahla). Ngololiwe osuka eForte dei Marmi ukuya ePisa yimizuzu engama-30, ukuya eLucca malunga nemizuzu engama-40 ukuya eFlorence malunga ne-1.30 h. Ngokuphathelele ukuhamba, sisebenza nabanye abantu abanokukuthatha kwii-Apuan Alps, okanye ukwenza nje indlela ethile entabeni apha eMontignoso, okanye kwiinduli zaseCandia ukuze ungcamle iwayini yaseTuscan. Ukuba ufuna ukuya ngokwakho, singakunika iingcebiso ukuba uye phi.
Ciao a te che stai leggendo il mio profilo! Sono Emanuela, e da anni oramai apro la mia casa ai viaggiatori che vogliono passare qualche giorno qui in Versilia. Ho grande passione per quello che faccio, soprattutto perchè mi permette sempre di conoscere personalità e nazionalità differenti. Mi piace far sentire a casa il mio ospite e do grande attenzione ad ogni dettaglio.
Ciao a te che stai leggendo il mio profilo! Sono Emanuela, e da anni oramai apro la mia casa ai viaggiatori che vogliono passare qualche giorno qui in Versilia. Ho grande passione…
Siya kuba sesandleni sakho ngokuhlala kwakho konke ukuba ufuna nantoni na, ukusuka kulwazi ngokubanzi kunye nabakhenkethi ukuya kulo lonke uhlobo lweengcebiso ukonwabela indawo yethu ukuya kweyona ilungileyo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Capanne-Prato-Cinquale